जापान र चीनबीचको तनाव मत्थर पार्ने यी जापानी पोर्नस्टार
BBC २०७४ माघ २ गते मा प्रकाशित 318 पटक पढिएको
जब जापानी अभिनेत्री तथा पूर्व पोर्नस्टार सोरा अओइले अनलाइनमा आफ्नो विवाहको घोषणा गरिन्, चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा यसले तहल्का नै मच्चायो।
नयाँ वर्षको दिन अओइले आफ्नो ‘इन्गेजमेन्ट’ को औँठीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन् र विश्वभरका आफ्ना प्रशंसकसामु खुसीको खबर बाँडिन्। ४८ घण्टाभित्रै वेइबोको उनको सो पोस्टमा एक लाख ७० हजारभन्दा बढी कमेन्ट र ८ लाख ३० हजार लाइक आयो।
चीन र जापानबीचको सम्बन्ध करिब एक शताब्दीदेखि तिक्त छ। तर किन चिनियाँहरुमा एक जापानी पोर्नस्टारको यति ठूलो प्रभाव छ त?
वास्तवमा अओइले चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको जीवनमा आश्चर्यजनक रुपमा महत्वपूर्ण भूमिकाका खेलेकी छन्।
‘हामी तिम्रा चलचित्रसँगै हुर्कियौँ र सँधैझैँ तिमीलाई समर्थन गरिरहनेछौँ,’ चिनियाँ माइक्रोब्लगिङ साइट वेइबोमा एक फ्यानले लेखे।
‘तिमी मेरालागि सदैव एक देवीका रुपमा रहनेछौ,’ अर्का वेइबो प्रयोगकर्ताले लेखे।
सन् २००० को दशकको सुरुदेखि नै अओइले पोर्नोग्राफीमा आफ्नो करिअरको सुरुवात गरेकी थिइन्। अनुमानित रुपमा उनले ९० भन्दा बढी वयष्क चलचित्रमा भूमिका निभाएकी छन्। सन् २००३ देखि २००५ सम्म त हरेक महिना उनको नयाँ पोर्न चलचित्र आउने गथ्र्यो।
चीनमा पोर्नोग्राफी प्रतिबन्धित छ, तै पनि उनी चिनियाँ पुरुषहरुको मुटुको ढुकढुकी बनेरै छोडिन्।
‘आफ्नो किशोरावस्थामा उपयुक्त यौन शिक्षा नपाएका थुप्रै चिनियाँहरुका लागि सोरा अओइ हाम्रो गुरुआमा बनिन्,’ एक सत्ताइस वर्षीय चिनियाँ पुरुष भन्छन्।
चिनियाँ इन्टरनेट तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको बेला चीनमा उनको लोकप्रियता बढ्यो। एकपछि अर्को गर्दै नयाँनयाँ वेब पोर्टल, अनलाइन समुदाय र स्ट्रिमिङ साइटहरु खुले, जसले पोर्नोग्राफीसहित अन्य सबै प्रकार सूचनाहरुलाई फैलिन मद्दत गरे।
‘सोरा अओइले चीनमा लोकप्रियता हासिल गर्ने सही समय उपयोग गरिन्,’ हङकङस्थित चाइनिज युनिभर्सिटीको जापान अध्ययन विभागका प्राध्यापक वाइ मिङ ङ भन्छन्।
‘उनी यो देशमा लोकप्रिय बन्दै गर्दा चीन यौनसहित अन्य सबै क्षेत्रमा खुलापन अपनाइरहेको थियो,’ उनी भन्छन्।
पोर्नोग्राफी चीनमा किशोरकिशोरीका लागि यौनका बारेमा सूचनाको मुख्य स्रोत हो। स्कुलमा यौनशिक्षा सीमित दिइन्छ र अभिभावक केटाकेटीलाई यसबारे ज्ञान दिन लजाउँछन्।
यतिधेरै पोर्न छ्याप्छ्याप्ती उपलब्ध हुँदा पनि सोरा अओइ किन अलग छिन् त?
एसियाली समाजमा यौन एक ‘ट्याबु’ हो तर पोर्नोग्राफीमा आफ्नो करिअरलाई लिएर अओइले आफूले कहिल्यै हीनताबोध महसुस नगरेको बताएकी छन्। उनले जहिले पनि ‘आफ्नो काममा रमाएको’ अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन्। अनलाइनमा उनीमाथि गरिएका तिक्त टिप्पणीहरुप्रति पनि उनले संयमतापूर्वक जवाफ दिने गरेकी छन्।
अओइले ११ अप्रिल २०१० मा ट्विटर खोलिन्। यो विषयमा ट्विटर प्रतिबन्धित रहेको चीनमा समाचार फैलियो। त्यसैकारण उनका अनेकौँ फ्यानले चीनको ‘ग्रेट फायरवाल’ पार गरेर भिपिएनमार्फत ट्विटर अकाउन्ट खोलेर उनलाई फलो गरे।
त्यो रातलाई पछि ‘सोरा अओइको रात’ नामाकरण गरियो।
सात महिनापछि अओइले वेइबोमा पनि अकाउन्ट खोलिन्। त्यसयता उनले एक करोड ८० लाख फलोअर प्राप्त गरिसकेकी छन्।
२०११ मा अओइले पोर्नोग्राफी छोडिन् र त्यसयता आफूलाई अभिनेत्री तथा गायकका रुपमा स्थापित गरिन्।
उनले म्युजिक सिंगल रिलिज गरिन् र अनलाइन भिडियो तथा चलचित्रमा अभिनय गरिन्। त्यसमा पनि चीन उनका लागि राम्रो बजार बन्यो।
चिनियाँ संस्कृतिसँग परिचित हुन उनले पनि थुप्रै मेहनत गरिन्। वेइबोमा चिनियाँ भाषामा लेखिने उनका हरेक पोस्ट उनी आफैँले लेख्ने गरेको उनका व्यवस्थापक बताउँछन्।
भाषाबाहेक उनले चिनियाँ हस्तलिपि पनि सिकेकी छन्। सन् २०१३ मा उनको एक हस्तलिपि ९२ हजार डलरमा बिक्री भएको बताइएको छ।
‘संसारकै सोरा अओइ’
चीन र जापानबीचको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका बीच चिनियाँहरुले उनको प्रशंसा गर्नु अचम्मलाग्दो देखिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले चीनमा गरेको अत्याचार र टापुहरुको स्वामित्वलाई लिएर दुई देशको बीचमा तनाव छ। चीन र जापानबीच विवादित टापुलाई चिनियाँहरु दियाओयु भन्छन् भने जापानीहरु सेनकाकु।
यद्यपि जापानमा बस्ने चिनियाँ लेखक वेनवेइ हुआङ चीन र जापानबीचको तनाव मत्थर पार्दै नागरिक सम्बन्ध बढाउनमा अओइले वास्तविक भूमिका खेलेको बताउँछन्।
‘चिनियाँ इन्टरनेटमा एकपटक एउटा भनाइ लोकप्रिय भएको थियो– ‘दियाओयु टापु चीनको हो, सोरा अओइ संसारकै हुन।’ यसरी उनले राजनीतिक तनावलाई कम गरेकी छन्,’ उनी भन्छन्।
प्राध्यापक वाइका अनुसार सोरा अओइ चीनमा प्रसिद्ध हुनुले भूमण्डलीकरणको युगमा राष्ट्रियताका आधारमा मात्र होइन, मिडिया सामग्रीको उपभोगका आधारमा पनि मानिसहरुले आफूलाई परिभाषित गर्छन् भन्ने देखाएको छ। बिबिसी
२०७४ माघ २ गते मा प्रकाशित